HETSIKA ARA-KOLONTSAINA : Fahombiazana tanteraka ny Festival Tsolabe
Notanterahina tao Sainte-Marie ny 10-11-12-13 oktobra lasa teo ny festival Tsolabe andiany faha-11 izay nokarakarain’ny fikambanana Tsolabe. Ny taona 2009 no nanomboka nisiany. 15 octobre 2019
Filohan’ny tetezamita i Andry Nirina Rajoelina tamin’izany fotoana izany, izay nanome toromarika an’i Saina Michel Désiré lehiben’ny Faritra Analanjirofo tamin’ izany fotoana izany ihany koa.
Tanjona ny fampivoarana miaraka ny kolontsaina sy ny fizahantany. « Tsola » izay midika hoe « dola ». Ny tsolabe izany dia mira dolabe. Dolabe iarahan’ny olona rehetra mifety miaraka.
Ho an’ity andiany faha-11 ity, dia niavaka tamin’ny Tsolabe efa nisy hatrizay. Araka ny fanazavana nentin’ny filohan’ny fikambanana Tsolabe Addonis Angelot, dia ity andiany ity no nisian’ny fanohanana ara-bola be indrindra nataon’ny fanjakana. Nohamafisin’i Addonis hatrany fa mbola ity andiany faha-11 ity ihany koa no nisy fiaraha-miasa mafy indrindra teo amin’ny orinasan-tserasera, indrindra ny RNM sy TVM. Izany dia vokatry ny fanohanana nataon’ny minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina, ny minisiteran’ny Fitaterana sy fizahantany. Teo ihany koa ny mpanohana avy amin’ny sehatra tsy miankina. Karnavaly mitety tanàna no nentina nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny festival ny zoma 11 oktobra. Fanokafana izay nialohavan’ny alim-pandihizana niarahana tamin’ny tarika Vaiavy Chila.
Nofaranana teny amin’ny kianjan’ny festival io karnavaly io. Kianja festival Tsolabe izay tao amin’ny kianja lisea no nisy azy. Ireo rehetra nandray anjara tamin’ny kabary nifandimbiasana, dia samy nanipika fa zava-dehibe amin’ny fampahafantarana ny kolontsaina Antenosy izao festival izao sady misintona mpizaha tany. Nanana solontena niatrika ny festival ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina tamin’ny alalan’ny talem-paritra ao Analanjirofo Ndiamahazo Mickaelys sy ny talem-paritry ny tranoben’ny kolontsaina Andrianoelison Henri. Teo ihany koa ny iraky ny OFNAC.
Nahatonga solontena ny avy amin’ny Minisiteran’ny Fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro tamin’ny alalan’ny talem-paritra Analanjirofo. Nandefa iraka ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenana faritany Toamasina Bavy Angelica Michelle. Ny mpanolo-tsaina manokany Saina Denis no nisolo tena azy.
Taorian’ny kabary nifandimbiasana ny zoma nanokafana tamin’ny fomba ofisialy io, dia nisy avy hatrany ny fitsidihana ireo trano heva. Nisy ny fampisehoana ny tantaran’ny Repoblika I izay nokarakarain’ny OFNAC sampan-draharaha eo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina. Nisy ihany koa ny fampirantiana an-tsary momba an’i Sainte-Marie sy ireo fomba amam-panao malagasy izay mbola ny Minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina hatrany no tompomarika tamin’ izany tamin’ny alalan’ny Tranoben’ny kolontsaina Fenoarivo-Atsinanana sy ny foibem-paritry ny serasera sy kolontsaina Analanjirofo.
Nisy ny fampirantiana ireo sakafo Antenosy. Nahaliana sy nahasarika olona maro ireo fampirantiana rehetra. Anisany nandray anjara tamin’ny fampirantiana ihany koa ny Minisiteran’ny Fizahantany miaraka tamin’ny APMF.
Ankoatra ireo fampirantiana nataon’ny minisitera dia nisy ny fampirantiana ireo asa tanana mampalaza an’i Sainte-Marie : asa sikotra momba ny trozona. Ny fampisehoana rehetra nataon’ireo mpanakanto nanafana ny festival dia nahaliana ny mponin’i Sainte-Marie sy ireo mpizaha tany tonga avokoa. Festival Tsolabe 2019 izay nahitana an’ireo mpakananto sangany :Fafass, Dalvis, Basta Lion, Tianjama, Vaiavy Chila, Dafamena. Nisy koa ny fifaninanana Miss Tsolabe 2019. Azon’i Carine ny laharana voalohany tamin’ izany. Nisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena kitra lalaovin’olona 7 sokajy lahy sy vavy ary vétéran. Na ny mpikarakara na ny mpanatrika dia samy nanipika fa nihatsara ny festival Tsolabe. Fahombiazana araka izany ny Festival Tsolabe andiany faha-11 tao Sainte-Marie.